OTU ESI HỌRỌ OKE DISKI MPỤGA - NJEDEBE MAKA ỊDABERE NA 2016, EZIGBO DISKI IKE MPỤ (REVIEWS) - DISK - 2019
Kedu otu esi ahọrọ diski ike di n'èzí?
Ndewo, ezigbo na-agụ nke blog pcpro100.info! Taa m ga-agwa gị banyere esi họrọ oke diski ike maka kọmputa gị, laptọọpụ ma ọ bụ mbadamba. Ma họrọ onye ziri ezi, dịka mkpa gị, nakwa na ịzụta ahụ ga-arụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ.
N'isiokwu a, m ga-agwa nuances niile nke ị na-ahọrọ draịva siri ike, tụlee n'ụzọ zuru ezu na njedebe ndị a ga-akwụ ụgwọ tupu ịzụrụ, na, n'ezie, m ga-achịkọta ọkwa maka ịdabere na gị.
1. Nbudata ike mbanye
1.1. Ihe kpatara ya
1.3. Ụdị ncheta
1.4. Ike disk ike
1.5. Nhọrọ ndị ọzọ maka ịhọrọ otu diski ike mpụga
2. Ndị isi na-arụ ọrụ ike mbanye
2.2. Omenala dị na Western
2.4. Ndị ọzọ na-emepụta ihe
3. Mpụga siri ike na - arụ ọrụ - ịdabere na 2016
Iji ghọta nke oma nke ike dikwa n'èzí dị mma na ihe mere, ịkwesịrị ikpebi na ndepụta nke parameters maka iji tụnyere. Na-elekwasịkarị anya na njirimara ndị na-esonụ:
Tụkwasị na nke ahụ, ọsọ nke ntụgharị nke diski, ọsọ nke nnyefe data, ọkwa nke ike, ike ọrụ nchekwa, enwere ike ịrụ ọrụ ndị ọzọ (mmiri na nchedo uzuzu, na-ebuba ngwaọrụ USB, wdg). Echefula banyere ihe ọ bụla ị chọrọ, dị ka agba ma ọ bụ ọnụnọ mkpuchi. Nke a bụ karịsịa ikpe ahụ mgbe anare ya dị ka onyinye.
Ụdị njirimara na-ekpebi nha disk ahụ. N'otu oge, ọ dịghị ndị ọrụ mpụga pụrụ iche, n'eziokwu, a na-eji disks nkịtị. Ejiri ha na akpa nwere ike nke ọzọ - otú ahụ ka ngwaọrụ mkpanaka si apụ. Ya mere, aha nke ụdị ihe ndị ahụ si na nkà na ụzụ na-anọ ọdụ: 2.5 "/ 3.5". Ka oge na-aga, a gbakwụnyere akwụkwọ mpịakọta nke ọbụna 1.8. "
3,5”. Nke a bụ ihe kachasị mkpa. N'ihi nnukwu oke nke efere nwere ikike buru ibu, akụkọ ahụ na-aga terabytes na ọtụtụ iribytes. Maka otu ihe ahụ, otu ozi gbasara ha bụ ọnụ ala. Nwee otutu ibu na mkpa iji ebu igbe na ike. Diski dị otú ahụ ga-efu site na puku 5 rubles maka ụdị ọnụahịa kachasị ọnụ. Western Digital WDBAAU0020HBK bụ diski na-ewu ewu na-ewu ewu nke ụdị ihe dị otú a ruo ọtụtụ ọnwa. Ọnụ ego ya bụ 17,200 rubles.
2,5”. Ụdị diski kachasị ọnụ na ọnụ ọnụ. Ma nke a bụ ihe mere: • ọkụ zuru ezu ma tụnyere 3.5 "; • enwere ike iji USB (mgbe ụfọdụ, eriri na-ewe 2 ọdụ ụgbọelu); • zuru oke - ruo 500 gigabytes. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla, ọ gwụla ma ọnụahịa maka 1 gigabyte ga-adị elu karịa ụdị nke mbụ. Ọnụ ego kacha nta nke diski nke usoro a bụ ihe dị ka 3000 rubles. Ndị kasị ewu ewu HDD nke a na-etolite kpatara -Transcend TS1TSJ25M3. Ọnụ ego ọ na-efu n'oge m nyochaa bụ 4700 rubles.
1,8”. Kasị kọmpat, ma ọ bụghị ma jidere ahịa. N'ihi ntakịrị na ojiji nke SSD-nchekwa nwere ike na-eri ihe karịrị 2.5 "draịva, ọ bụghị dị ala karịa ha na olu. Ihe kachasị ewu ewu bụ Transcend TS128GESD400K, nke na-efu ihe dị ka 4,000 rubles, ma nyochaa banyere ya na-ahapụ ihe dị ukwuu iji chọọ ya.
The interface na-ekpebi usoro nke ijikọ disk na kọmputa, ya bụ, nke njikọ ya nwere ike jikọọ. Ka anyị lee anya na nhọrọ kachasị ewu ewu.
USB - nhọrọ kachasị mma na njikọ zuru ụwa ọnụ. N'ihe ọ bụla na ngwaọrụ ọ nwere mmepụta USB ma ọ bụ ihe nkwụnye kwesịrị ekwesị. Taa, USB 3.0 bụ ọkọlọtọ dị ugbu a - ọ na - enye ọsọ ọsọ ọsọ ruo 5 GB kwa nke abụọ, ebe 2.0 nwere ike naanị 480 MB.
Ntị! Version 3.1 na ọsọ ọsọ ruo 10 Gb / s na-arụ ọrụ na ụdị Type-C: enwere ike ịtinye ya n'akụkụ ọ bụla, ma ọ gaghị adaba na ndị agadi. Tupu iwere diski dị otú ahụ, jide n'aka na oghere kwesịrị ekwesị dị na ebe ọ na-akwado usoro sistemụ.
Disks na USB 2.0 na 3.0 njikọ dị iche iche na ọnụahịa, ma nhọrọ nwere ike zụrụ si 3,000 rubles. A na-akpọrịrị ụdị ndị a kachasị ewu ewu dị otú ahụ.Transcend TS1TSJ25M3. Ma ihe ole na ole USB 3.1 bụ ihe doro anya dị oke ọnụ - maka ha ka ị ga-akwụ ụgwọ site na puku mmadụ asatọ. N'ime ndị a, m ga-alụ di ma ọ bụ nwunyeADATA SE730 250GB, na-eri ihe dị ka 9,200 rubles. Na n'ụzọ, ọ dị nnọọ jụụ.
SATA.Ụkpụrụ SATA fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịpụrụ anya site na ọnọdụ nke mpụga mpụga, ọ dịghị ụdị ya na-ere ere. Ọ na-enye ohere ọsọ ọsọ ruo 1.5 / 3/6 GB kwa nke abụọ, dịka - nke ahụ bụ, ọ na-efunahụ USB na ọsọ na oke. N'ezie, a na-eji SATA ugbu a naanị maka draịva n'ime ụlọ.
ESATA - nkwụnye ego site n'aka ndị SATA-njikọta. Ọ nwere ọdịdị njikọ dịtụ iche. Ọ na-emetụtakwa, n'ihi na ụgbọala mpụga na ọkọlọtọ dị otú a ọ ga-adị mkpa ịkwụ ụgwọ site na puku 5 rubles.
Firewire.Ọgba ọsọ ọkụ ọkụ nwere ike iru 400 Mbps. Otú ọ dị, a na-ahụkarị njikọ dị otú ahụ n'ụzọ siri ike. Ị nwere ike ịchọta ihe nlereanya maka 5400 rubles, ma nke a bụ ihe ọzọ, maka ụdị ndị ọzọ ọnụahịa ahụ na-amalite site na 12-13 puku.
Thunderbolt Na-arụ ọrụ site na otu njikọ maka kọmputa Apple. Nfefe mbufe bụ, n'ezie, dị mma - ruo 10 Gb / s, mana incompatibility na ụdị ejikọta ndị ọzọ na-etinye obe n'obe. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji nanị laptọọpụ na Apple, ịnwere ike iwe ya.
Ndị mpụga mpụga nwere ike ịrụ ọrụ na ebe nchekwa ọdịnala na diski na-agbanwe agbanwe (HDD), ma ọ bụ na-agba ọsọ siri ike nke oge a (SSD). Ọzọkwa na ahịa e nwere usoro jikoro nke eji SSD ngwa ngwa maka caching, na akụkụ HDD bụ maka nchekwa nchekwa oge.
HDD - nkpuchi kpochapu nke bu efere. N'ihi na teknụzụ enwetara, nke a bụ ihe ngwọta bara uru. Nhọrọ dị mma maka nchekwa nchekwa oge, ebe nnukwu diski dị oke ọnụ. Ihe ọghọm nke HDD - mkpọtụ ụda, dabere na ọsọ nke ntụgharị nke diski. Ụdị na 5400 rpm bụ quieter karịa na 7200 rpm. Ọnụahịa nke HDD mpụga na-amalite site na ihe dịka 2800 rubles. Ọzọ ihe nlereanya kachasị ewu ewu bụTranscend TS1TSJ25M3.
SSD - nke siri ike, nke na-enweghị akụkụ ọ bụla na-akpụ akpụ, nke na-ebelata ihe ize ndụ nke ọdịda ma ọ bụrụ na ngwaọrụ ahụ na-ama jijiji. Differs na abawanye data nnyefe ọsọ na nnọọ kọmpat nha. Ka ọ dị ugbu a, ọ dị ala na ikike ọnụahịa na ọnụahịa: maka obere ụgbọ ala 128 GB, ndị ahịa na-ajụ maka 4000-4500 rubles. A na-azụkarịTranscend TS128GESD400K enwe ọnụ ahịa nke 4100 ruyuly, ma mgbe ahụ, oge niile na-eme mkpesa banyere ya ma gbụọ ọnụ. Ya mere, ọ ka mma ịchichapụ ma zụta ssd-schnick sistem nkịtị, dịka ọmụmaatụSamsung T1 USB 500GB USB 3.0 SSD mpụga (MU-PS500B / AM), ma ọnụahịa ọnụahịa ga-ihe dị ka 18 000 rubles.
Samsung T1 USB 500GB USB 3.0 SSD mpụga (MU-PS500B / AM
Ngwakọta HDD + SSDdị nnọọ obere. Ezubere nghazi ngwakọ iji jikọta uru nke abụọ ahụ edepụtara n'elu na otu ngwaọrụ. N'ezie, mkpa maka nkesa ndị dị otú ahụ bụ: ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọsọ rụọ ọrụ ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-ewere SSD esịtidem zuru ezu, na HDD zuru ezu dị mma maka nchekwa.
Maka olu, mgbe ahụ, ọ dị mkpa ka ị gbasaa site na ihe ndị a. Nke mbụ, site n'ịgba ụda olu, ọnụahịa maka gigabyte na-ebelata. Nke abuo, ntinye ntaneti (buru otu ihe nkiri a) na-eto eto. Ya mere ana m atụ aro ileba anya na nnukwu mpịakọta, dịka ọmụmaatụ, ịhọrọ ọkpọ ụgbọala siri ike TB 1, karịsịa ebe ọnụahịa ndị dị otú ahụ na-amalite site na 3,400 rubles. N'otu oge ahụ, ọnụahịa TB diski ike 2 na-amalite na 5000. Uru ahụ pụtara ìhè.
Onodu diski ike 1 TB - ugwo
Transcend TS1TSJ25M3. Ahịa si 4000 rubles;
Seagate STBU1000200 - site na 4500 rubles;
ADATA DashDrive Durable HD650 1TB - site na 3800 rubles
Western Digital WDBUZG0010BBK-EESN - site na 3800 rubles.
Seagate STDR1000200 - si 3850 rubles.
Okwute diski ike 2 TB - nyocha
Western Digital WDBAAU0020HBK - site na 1700 rubles;
Seagate STDR2000200 - site na 5500 rubles;
Western Digital WDBU6Y0020BBK-EESN - site na 5500 rubles;
Western Digital My Passport Ultra 2 TB (WDBBUZ0020B-EEUE) 0 site na 6490 rubles;
Seagate STBX2000401 - site na 8340 rubles.
Enweghị m ike ịhụ arụmụka ọ bụla maka obere olu. Ọ gwụla ma ịchọrọ ịdekọ data zuru ezu ma nye ha onye ọzọ na diski mpụga. Ma ọ bụ diski ga-eji, dịka ọmụmaatụ, na TV nke na-akwado naanị otu ego. Mgbe ahụ, ọ naghị eme ka ụbụrụ gafee maka gigabytes.
Ụlọ ma ọ bụ obere.Ọ bụrụ naanị na ịchọrọ ịmalite ohere dịnụ, na-enweghị mkpa iburu diski n'ebe ọ bụla, ịnwere ike iji igbe maka draịvụ ike. Ha nwere ike jikọọ site na USB, dịka ọmụmaatụ, na disk n'onwe ya na akpa - site na SATA. Ọ na-apụta na ọ dị njọ, ma ọ bụ ụyọkọ dị mma. Ngwunye ngwa ngwa zuru oke dị nnọọ kọmpat. Ọ bụrụ na ịhọrọ ihe nlereanya na SSD na obere olu, ị nwere ike ịhọrọ ụdị na-eru 100 grams. Ọ bụ ihe obi ụtọ iji ha - ihe bụ isi bụ ịhapụ mmadụ na mberede na tebụl ọzọ.
Enwekwu ihe omimi na aru.Nke a dị oke mkpa maka ụdị ndị na-anọchi anya. A sị ka e kwuwe, diski diski ahụ, karịsịa ihe ntanetị atọ "ahụ, na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ n'oge ọrụ. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-ede data. Na nke a, ọ ka mma ịhọrọ ihe nlereanya na onye na-akwado ya. N'ezie, ọ ga-eme mkpọtụ, ma ọ ga-eme ka ụgbọala ahụ dị jụụ ma mee ka ọ dịkwuo oge. N'ihe banyere okwu ahụ, metal ahụ na-ewepụ okpomọkụ karị ma, ya mere, bụ nhọrọ kachasị mma. Plastic na-ebuwanye njọ na kpo oku, n'ihi ya, e nwere ihe ize ndụ nke ime ka diski gabiga ókè ma kwụsị ịrụ ọrụ.
Mgbochi sitere na mmiri na ájá, mgbochi.Omume a na-enweta ike iji mee ma ọ dịkarịa ala ụdị ole na ole n'ime akara ahụ echedoro site na mmetụta nke ihe dị iche iche na-emebi emebi. Dị ka ihe atụ, site na mmiri na ájá. A na-eji ụdị disks ahụ mee ihe ọbụna n'ọnọdụ ndị dị oke mma, ha ga-arụkwa ọrụ nke ọma. N'ezie, igwu mmiri oge na-adịghị atụ aro ya, mana ị gaghị atụ egwu mmiri mmiri. Guzo naanị wiil na nchebe na-enweghị ihe ọ bụla. Dabere n'ụdị ọkọlọtọ ahụ, enwere ike ịdakwasị ha na mberede ma ọ bụ tinye ya na windo site n'ala 3-4. Agaghị etinye m data n'ihe ize ndụ, ma ọ dị mma ịmara na ọ dịkarịa ala na akụkọ ihe mere eme a la "dara site na aka" disk ahụ ga-adị ndụ.
Mgbanwe ọsọ disk.Ọtụtụ ntinye na-adabere na ọsọ nke ntụgharị nke diski (a tụgharịrị na revolutions kwa nkeji ma ọ bụ rpm): ọkwa ntinye data, ọkwa ụda, ole diski chọrọ ike iji rụọ ọrụ na otú ọ na-esi agba ya, wdg.
5400 revolutions - ihe nkedo nwayọ na - adị jụụ - a na - akpọkarị ha na ụdị "ngwaọrụ". Mma maka nchekwa data.
7200 revolutions - Ọnụ ọgụgụ dị ala nke ọsọ ọsọ na-enye arụmọrụ ziri ezi. Ọ bụrụ na enweghi ihe a chọrọ, nke a bụ nhọrọ kacha mma.
10,000 atụgharị - nke kachasị ngwa ngwa (n'etiti HDD), nke kachasị ike na nke kachasị. Ọsọ ahụ dị ala karịa SSD, ya mere, uru ndị ahụ bara uru.
Okwute ihe nhazi.Mbadamba ihe - obere obere ihe nchekwa nke na-agba ọsọ ahụ. N'ọtụtụ ụdị, ọnụ ọgụgụ ya bara uru site na 8 ruo 64 megabytes. Ihe dị elu karịa uru ahụ, ngwa ngwa na-arụ ọrụ na diski ahụ. Ya mere ana m atụ aro ilekwasị anya na ọnụ ọgụgụ nke ọ dịkarịa ala megabytes 32.
Ngwaọrụ nyere.Ụfọdụ ndị na-emepụta ihe na-enye diski na mmemme pụrụ iche. Ngwaọrụ dị otú a nwere ike ịrụpụta na-akpaghị aka na nchekwa nke nchekwa nchekwa dịka usoro nhazi oge. Ma ọ bụ, ị nwere ike ịmebe mpempe zoro ezo site na akụkụ nke diski, ohere nke a ga-echebe site na paswọọdụ. N'ọnọdụ ọ bụla, buru n'uche na a pụrụ idozi ihe omume dị mkpa yiri nke ahụ na ngwanrọ ndị ọzọ.
Njikọ ndị ọzọ na ụdị njikọ.Ọtụtụ ụdị na-abịa na njikọ Ethernet netwọk ọkọlọtọ. A pụrụ iji disks ndị dị otú a dị ka igwefoto netwọk ịnweta site na kọmputa dị iche iche. Nhọrọ kachasị mma bụ ịchekwa faịlụ echekwara na ha. A na-enye ihe mgbochi mpụga na nkwụnye Wi-Fi maka ijikọta netwọk ikuku. Na nke a, ha nwere ike iji dịka ihe nkesa faịlụ ụlọ ma chekwaa faịlụ multimedia na ya. Akụrụngwa ndị ọzọ na ikpe nwere ike ịnwe mmepụta USB ọzọ. Ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa iji ngwa ngwa kwupụta ama ama gị, ma gaa na ntanetị kwa umengwụ.
Ọdịdị.Ee, a ga-echebara nlezianya nlebara anya. Ọ bụrụ na ịhọrọ diski dị ka onyinye, ọ dị mma ịmara ihe ụtọ nke onye nwe ya n'ọdịnihu (dịka ọmụmaatụ, pink ma ọ bụ nke na-adịghị edozi ahụ, na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha ntụ ọcha, wdg). Maka mfe nke ebu, ana m akwado ịzụta ihe na diski - ọ na-adị ala ruru ala, ọ dị mfe ijide ya.
Cool na-ekpuchi maka draịva siri ike
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọkachamara na mmepụta nke draịva siri ike. N'okpuru ebe a, m ga-eleba anya na ndị kachasị ama ha na ọkwa nke ụdị ha kachasị mma nke disks.
Otu n'ime ndị nrụpụta kachasị ukwuu nke draịva siri ike bụ Seagate (USA). Ihe a na-ejighị n'aka na ngwaahịa ya bụ ọnụ ahịa ọnụ. Dị ka data dịgasị iche iche, ụlọ ọrụ ahụ dị ihe dịka 40% na ụlọ ahịa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị lelee ọnụ ọgụgụ nke ntiwapụ, ọ na-apụta na ndị ahịa Seagate na-enyefee ha na ụlọ ọrụ mmezi dị iche iche na PC na ihe karịrị pasent 50 nke ikpe. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ ga-adị mfe ịnweta ihe isi ike maka ndị fans nke ika a. Ọnụahịa ahụ na-amalite site na uru nke 2800 rubles kwa diski.
Top Seagate Mgbagwoju anya nke dị n'èzí
Seagate STDR2000200 (2 TB) - site na 5490 rubles;
Seagate STDT3000200 (3 TB) - si 6,100 rubles;
Seagate STCD500202 (500 GB) - site na 3,500 rubles.
Otu nnukwu ụlọ ọrụ bụ Western Digital (USA). O nwekwara akụkụ dị egwu nke ahịa ahụ. Ndị ọchịchị dịgasị iche iche, gụnyere "akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ" nke dị jụụ na nke dị jụụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, hụrụ ndị ahịa n'anya. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na nsogbu na WD disks na-akọ ọtụtụ ugboro ugboro. Ọnụahịa nke Digital Western Digital na-amalite site n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3000 rubles.
Ngwaọrụ Ike Dipịtara Ọdịda Anyanwụ nke kachasị mma na Western
Western Digital WDBAAU0020HBK (2 TB) - site na 17,200 rubles;
Western Digital WDBUZG0010BBK-EESN (1 TB) - si 3,600 rubles;
Western Digital My Passport Ultra 1 TB (WDBJNZ0010B-EEUE) - site na 6800 rubles.
Ụlọ ọrụ Taiwanese nke na-arụ ụdị ngwongwo niile - site na ebe nchekwa ebule na ndị ọrụ mgbasa ozi dijitalụ. Nke a na-agụnye ihe mgbochi siri ike. Dị ka m dere n'elu, Transcend TS1TSJ25M3 bụ ọkpụkpụ siri ike a na-ahụkarị n'èzí n'etiti ndị agbata obi anyị. Ọ dị ọnụ ala, rere ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa ọ bụla, ndị mmadụ dị ka ya. Ma echiche nyocha na-adịghị mma banyere ya zuru. Mụ onwe m ejighi ya, enweghị m ike ịrụ ụka, mana ha na-eme mkpesa banyere ya mgbe mgbe. Na ọnụego nke ịdabere na ya, Agaghị m etinye ya na nke iri kachasị.
Ịga n'ihu na ụlọ ọrụ dịka Hitachi na Toshiba. Hitachi nwere oge magburu onwe ya iji ghara ịda mbà: ndụ ndụ n'ogologo tupu ọdịdị nke nsogbu ọ bụla ha nwere karịa afọ 5. N'ikwu okwu ndị ọzọ, ọbụna na iji ọrụ eme ihe, diski ndị a na-enwekarị ihe a pụrụ ịtụkwasị obi. Toshiba mechiri elu anọ. Nkịtị nke ụlọ ọrụ a nwere ezi njirimara. Ọnụ ahịa adịghịkwa iche na ndị asọmpi.
Ị nwekwara ike ịdeba Samsung, nke ji nlezianya rụọ arụmọrụ. Obere ụlọ nke ụlọ ọrụ a ga-eri ma ọ dịkarịa ala 2850 rubles.
Ụlọ ọrụ ndị dị ka ADATA na Ike Sịkọn na-enye ọtụtụ disks nke na-efu ihe dịka puku rubles 3,000-3,500. N'aka nke aka, igwefoto nke ụlọ ọrụ ndị a na-abụkarị ndị na-achọ nkọcha, ma ọ bụ n'ihi nges, ma ọ bụ n'ihi nsogbu na ihe ndị ahụ. N'aka nke ọzọ, ahụmahụ nke iji ujo, mmiri na diski dustproof site na Sịlịiki Ike m na ọtụtụ ndị enyi m dị mma.
Ọ na-anọgide na-achọpụta ezigbo diski ike mpụga. Dị ka ọ na - emekarị, ọ gaghị ekwe omume inye otu azịza kpọmkwem ebe a - ọtụtụ njedebe nwere ike imetụta mkpebi ndị ikpe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatị ọrụ ahụ na data, dịka ọmụmaatụ, na-ejikarị vidiyo dị oke egwu - were kpoo SSD. Ịchọrọ idebe foto nke ezinụlọ maka iri afọ ole na ole - họta HDD site na Western Digital. Maka ihe nkesa faịlụ, ị ga-achọ ihe site na usoro "akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ," nke dị jụụ na enweghị ihe ọ bụla, n'ihi na diski dị otú ahụ ga-arụ ọrụ na mgbe niile. Maka onwe m, anaghị m agbapụta ụdị ndị ahụ na mpụga ike na-arụ ọrụ nke ọma:
Toshiba Canvio Njikere 1TB
Kedu diski ị ga-achọ ịzụta? Kwuo echiche gị na ihe ndị a. Stable arụ ọrụ gị draịva!